चीनसँग शीतयुद्धका लागि अमेरिका तम्तयार, ट्रम्पभन्दा अघि बढेर किन शत्रुता मोल्दैछन् बाइडन ?
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले मंगलवार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो देशले शीतयुद्ध नचाहेको बताए । विगतको शीतयुद्धमा जस्तो गरी मुलुकहरूलाई खेमामा बाँड्न नहुने बरू सबैसँग मिलेर आतंकवाद र महामारी जस्ता विश्वव्यापी शत्रुविरुद्ध लड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तर बाइडनको भनाइ र गराइमा आकाश जमीनको अन्तर देखिएको छ । वास्तवमा बाइडन प्रशासनले अमेरिकाभित्रै र विश्व मञ्चमा चालेका सबै नयाँ कदमहरू चीनबाट तेर्सिएको वास्तविक र काल्पनिक दुवैथरी जोखिमको प्रतिक्रियामा आइरहेको देखिन्छ ।
त्यसो त बाइडनअघिका राष्ट्रपतिहरू पनि चीनको उदयबाट चिन्तित थिए । चीनलाई विश्व व्यापार संगठनमा ल्याउनका लागि पहल गर्ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले उक्त कदमबाट चीन पश्चिमी मुलुक जस्तै लोकतान्त्रिक र उदारवादी बन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर चीनले आफ्नो मौलिकता त्यागेर पश्चिमको अन्धानुकरण गर्ने बाटो अपनाएन ।
उनीपछिका जर्ज डब्ल्यू बुशले चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धी मानेका थिए तर आतंकवादविरुद्धको युद्धमा बुश प्रशासन अल्झिएकाले चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको थिएन ।
बुशपछिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पिभट टु एसिया नीति अपनाएर चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई चर्काउन खोजेका थिए । त्यसको परिणामस्वरूप सन् २०१६ मा चीनलाई बाहिरै राखेर अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग पराप्रशान्तीय साझेदारी (ट्रान्सपसिफिक पार्टनरशिप वा टीपीपी) बनायो । पछि ट्रम्प प्रशासन उक्त साझेदारीबाट हट्यो र अहिले चीनले त्यस साझेदारीमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिएको छ ।
डोनल्ड ट्रम्पले चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गरेको भए पनि व्यापारयुद्ध गरे अनि कार्यकालको अन्त्यतिर कोभिड फैलिएको दोष चीनमाथि लगाइरहे र सम्बन्ध चिस्याए ।
राजनीतिमै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिताएका र कूटनीतिमा पनि गहिरो अनुभव बोकेका जो बाइडनले ट्रम्पकालीन शत्रुताको साटो चीनसँग कूटनीतिक सम्पर्क कायम गर्ने अपेक्षा थियो । तर बाइडन प्रशासनले चीनप्रति राखेको शत्रुभाव पहिलेको प्रशासनभन्दा कठोर देखिएको छ ।
बेलायत र अस्ट्रेलियासँग अमेरिकाले अघिल्लो साता गरेको अकिस सम्झौताको घोषणा त्यसको ताजा उदाहरण हो । आफ्नो पुरानो साझेदार फ्रान्सलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चँदै अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई बेलायतको साथ लिएर आणविक ऊर्जाले चल्ने पनडुब्बीहरू बेच्ने भएको छ जबकि फ्रान्सले अस्ट्रेलियासँग पनडुब्बी सम्झौता गरिसकेको थियो ।
त्यसो त चीनले दक्षिण चीन सागरमा आक्रामक गतिविधि गरिरहेको अनि भारतसँग पनि द्वन्द्व गरेको स्थितिमा अमेरिकाले त्यसको प्रतिक्रिया दिनु स्वाभाविक नै हो ।
तर बाइडन प्रशासनले चीनसँग गर्नुपर्ने व्यवहारमा सुझबुझ अपनाएको देखिँदैन । चीनको उदयलाई आत्मसात गर्दै अमेरिकी शक्तिलाई तदनुकूल समायोजन गर्ने व्यावहारिक कूटनीतिको बाटो अमेरिकाले अपनाउनुपर्ने थियो ।
तर चीनलाई उसले प्रतिस्पर्धी मात्र नभई लगभग आफ्नो अस्तित्वमाथिकै जोखिमका रूपमा लिइरहेको छ । कुरा नचपाई भन्नुपर्दा अमेरिकाले चीनलाई नयाँ शीतयुद्धको शत्रु मुलुकका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ ।
बाइडन प्रशासनले चीनलाई गर्ने वर्णनबाट नै उसको सोच उजागर हुन्छ । दी इकोनोमिस्ट पत्रिकामा छापिएको बाइडन्स न्यु चाइना डक्ट्रिन शीर्षकको लेखमा उल्लेख गरिएअनुसार, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सहअस्तित्व भन्दा पनि प्रभुत्व कायम गर्नमा बढी रुचि देखाइरहेकाले अमेरिकाले चीनप्रति आक्रामक दृष्टिकोण अपनाउनुपरेको हो ।
यसको सीधा अर्थ के हो भने वाशिङटनको नजरमा चीन एक विस्तारवादी शक्ति हो र विश्वमा प्रभुत्व जमाउने उसको सोच छ । त्यसलाई परास्त गर्नु अमेरिकाको परम कर्तव्य हो ।
तर संसारका सबै छेउकुनामा सैन्य अड्डा भएको अमेरिका विस्तारवादी शक्ति हो । आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व खस्किन लाग्यो भन्ने पीरका कारण ऊ चीनको उदय तथा प्रभावलाई रोक्न कोशिश गरिरहेको छ ।
शीतयुद्धको बेलामा डोमिनो सिद्धान्त अपनाएर सोभियत संघको प्रभावलाई न्यून बनाउने अमेरिकाको ध्येय हुन्थ्यो । त्यसमा विचारधारात्मक जोखिमको भय मिसिएको हुन्थ्यो । अर्थात् कुनै क्षेत्रको एक मुलुक कम्युनिस्ट भयो भने त्यस क्षेत्रका अन्य मुलुक पनि कम्युनिस्ट बन्न सक्छन् भन्ने डरका कारण अमेरिकाले कम्युनिस्टको उदय हुनै दिँदैनथियो । चिली र इन्डोनेसियामा कम्युनिस्टविरोधी तानाशाहहरूलाई अमेरिकाले सत्तामा ल्याउन गरेको पहल त्यसको उदाहरण हो ।
सोभियत कम्युनिस्टहरूको पतनको ३० वर्षपछि अहिले पुनः अर्को कम्युनिस्ट महाशक्तिको उदय भएकाले त्यसलाई पनि अमेरिकाले जोखिमका रूपमा लिन थालेको छ । सोभियतलाई रोक्न नेटोको स्थापना गरेको अमेरिकाले अब चीनलाई रोक्न पनि त्यही नेटो (र अन्य साझेदारीको) उपयोग गर्न चाहेको हुन सक्छ ।
त्यसैले त नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले केही महिनाअघि दाबी गरे– चीन हाम्रो मूल्यमान्यतालाई स्वीकार गर्दैन । यसरी मूल्यमान्यताको कुरा उठाएर उनले चीन अमेरिका वा पश्चिमको आर्थिक प्रतिस्पर्धी नभई विचारधारात्मक र सांस्कृतिक जोखिम तेर्स्याउने शत्रुशक्ति हो भन्ने आशय व्यक्त गरेका हुन् । यो शीतयुद्धको भाषा नभए के हो त ?
विगतको शीतयुद्धमा अमेरिकीहरू सोभियतको खतराबाट अत्यन्तै भयभीत थिए । क्युबाली क्षेप्यास्त्र संकटपछि त झन् सोभियतको खतरा अमेरिकी मुख्यभूमि नजिकै आइपुगेको थियो । त्यस्तै किसिमको डर अहिले पुनः जगाउने कोशिश गरिएको देखिन्छ । गत अप्रिल महिनामा अमेरिकाको गुप्तचर समुदायले प्रकाशन गरेको वार्षिक जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अमेरिकाका लागि सबभन्दा ठूलो जोखिम चीनबाट भएको दाबी गरेको थियो ।
चीनबाट भएको भनिएको त्यही डरका कारण अमेरिकाले अस्ट्रेलियासँग पनडुब्बी सम्बन्धी सम्झौता गरेको हो । त्यस सम्झौतामार्फत अमेरिकाले चीनको समीपवर्ती क्षेत्रमा आफ्नो सैन्यशक्तिको प्रदर्शन गर्न खोजेको छ । अस्ट्रेलियाको भूमि प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध आक्रामकता देखाउनका लागि अमेरिकाले यो सम्झौता गरेको स्पष्ट छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रसँग जोडिएको नर्दन अस्ट्रेलियामा अमेरिकाले सैन्य अड्डा बनाउन खोजेको छ । न्युज डट् कम डट् एयूमा प्रकाशित समाचारअनुसार, चारवटा नयाँ सैन्य अड्डाहरू रोबर्टसन ब्यारेक्स, कंगारू फ्ल्याट्स, माउन्ट बन्डे र ब्राडशा फील्डमा राखिनेछन् । चीनसँग घनीभूत आर्थिक सम्बन्ध बनाएको अस्ट्रेलियाले आसन्न शीतयुद्धमा आफू अमेरिकी खेमामा रहेको स्पष्ट पार्ने गरी अमेरिकी सैन्य अड्डा बनाउन दिने भएपछि अब क्षेत्रीय सम्बन्धहरू भत्कने भएका छन् ।
चीनविरुद्धको साझेदारी निर्माणमा अकिस सम्झौता बाहेक क्वाड पनि छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानबीचको यस साझेदारीको प्रमुख उद्देश्य चीनको घेराबन्दी नै हो । अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले क्वाडको आधारशिलामा उभिएर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले बलियो नीति निर्माण गर्नेछ भनी दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले पनि चीनविरुद्धको साझेदारी बनाउनका लागि समान सोच भएका मुलुकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने बताएका छन् । यो शीतयुद्धकालीन खेमा निर्माण नभए के हो त ?
यी सबै घटनाक्रम हेर्दा अमेरिका चीनविरुद्ध नयाँ शीतयुद्ध लड्नका लागि कम्मर कसिरहेको देखिन्छ । त्यसक्रममा उसले चीनलाई सैन्य रूपमा घेराबन्दी गर्ने सोच बनाएको छ । त्यही सोचलाई कार्यान्वयन गर्न अकिस र क्वाडलाई अमेरिकाले अघि बढाउन खोजेको छ ।
यस्तो स्थिति रहँदा तटस्थ भूमिकामा रहन चाहने वा रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्न चाहने मुलुकहरूलाई अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्न सक्छ ।
जर्ज डब्ल्यू बुशले आतंकवादविरुद्धको युद्धका बेलामा कि हाम्रो साथमा, कि आतंकवादीको साथमा भनी विकल्प दिएका थिए । अहिले बाइडन प्रशासनले पनि शीतयुद्धमा कि हाम्रो साथमा, कि चीनको साथमा रहनुपर्ने विकल्पतर्फ संसारका मुलुकहरूलाई धकेलिरहेका छन् ।
संसारलाई अनावश्यक र खतरनाक युद्धमा होम्नका लागि बाइडन प्रशासन लागिपरेको देखिन्छ तर बाइडन आफू चाहिँ अमेरिकाले शीतयुद्ध नचाहेको बताउँदैछन् । उनलाई संसारले कसरी पत्याउने ?
चीनको सदिच्छा : केपी ओली र प्रचण्ड मिलून् ! सम्भव छ ...
शाहरुखपुत्र आर्यन खान पक्राउ प्रकरण– दृश्यमा लागूऔषध...
झिझिया नाच हेर्न गएका युवक इनारमा मृत भेटिए
कुन उमेरको मानिस कति घण्टा सुत्ने ? हेर्नुहोस्, सूची